Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်နီမော် အမှုကို ဇွန် ၁၈ တွင် အမိန့်ချမည်
ကျောက်နီမော် အမှုကို ဇွန် ၁၈ တွင် အမိန့်ချမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား အမျိုးသား ၃ ဦးမှ အတင်းအဓ္ဒမပြုကျင့်ကာ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသော တရာခံသုံးဦးမှ ကျန်ရှိ နှစ်ဦးအား ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုကဲ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ရာတွင် အခြားအနှောင့် အယှက် မည်သည့်တစ်စုံတရာမျှ မရှိလျှင် ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ် သွား မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီအမှုကို အမြန်ဆုံး အမိန့်ချမှတ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် ။ အခြားအနှောင့် အယှက်တွေ မရှိဘူးဆိုရင် မနက်ဖြန်အပြီး သတ်အမိန့် ချမှတ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:01
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ကျောက်နီမော် အမှုကို ဇွန် ၁၈ တွင် အမိန့်ချမည် . All Rights Reserved